यस्तो नम्बरबाट मिसकल आयो ? ख्याल गर्नुस् तपाईंको ब्यालेन्स सकिएला — KhabarTweet
यस्तो नम्बरबाट मिसकल आयो ? ख्याल गर्नुस् तपाईंको ब्यालेन्स सकिएला
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत्र २५, २०७३ समय: ९:४२:५१
काठमाडौं । तपाईंलाईं विदेशी नम्बरबाट लगातार मिसकल आइरहेको छ ? के त्यो नम्बर टिउनिसयाको देखाउँछ ? त्यसो भए ख्याल गर्नुस्, त्यो नम्बरमा तपाईंले कल ब्याक गर्दा सबै ब्यालेन्स सकिन सक्छ । केही दिन यता टिउनिसियाको नम्बर देखाउने
+0२१६–९८०९०४२७ जस्ता नम्बरबाट नेपाली मोबाइल प्रयोगकर्तालाई मिसकल आइरहेको छ । कलब्याक गर्दा कतिपयको मोबाइलमा रहेको ब्यालेन्स रकम पनि सकिएको छ ।
‘मलाई पनि आएको थियो म त साथीहरूले होला भनेर कलब्याक गरेको तीस सेकेन्डमा ६१ रूपैयाँ चट भयो । बेसीशहरका किशोरकुमार बस्नेतले भने । यो ठगीधन्दा भएको बताइएको छ । टेलिकम प्रदायक संस्थाहरुले सावधानी अपनाउन ग्राहकहरुलार्इ आग्रह गरेका छन्। नेपाल टेलिकमले यस विषयमा अध्ययन भइरहेको बताएको छ ।